Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada gumaysiga oo lagu naafeeyay dagaalada socda iyo roobabkii Guga oo waxyeelo ka gaystay meelaha qaarkood
Ciidamada gumaysiga oo lagu naafeeyay dagaalada socda iyo roobabkii Guga oo waxyeelo ka gaystay meelaha qaarkood
Posted by ONA Admin	/ April 29, 2013
Wararka nagasoo gaadhaya wadanka Ogaadeeniya gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in dagaalo badan ay ka socdaan qaybo kamid ah dalka Ogaadeeniya ee ay Itobiya gumaysato. Dagaaladaasi oo lagu gaadhsiiya gumaysiga Itobiyaayaa khasaare laxaad leh ayaa u dhacay sidatan;
07/04/2013 kamiin ay ka xidheen cutub katirsan NH/CWXO deegaanka lagu magacaaabo Sanxaskule oo Galaalshe katirsan ayaa waxaa soo galay gaadiid ay wateen askarta gumaysiga Itobiyawaxaana halkaasi lagu gubay hal baabuur oo askartii saarnayd ay san waxba kabixin iyadoo khasaare kale lasoo gaadhsiiyey gaadiidkii kale ee lasocday kan hawada lagu dubtay.
16/04/2013 dagaal kadhacay Godda oo Baabili katirsan ayaa waxaa askarta gumaysiga lagaga dilay 5 Askari
12/04/2013 Deegaanka lagu macabaabo Cinjirka oo Gunagado u dhow dagaal halkaasi ka dhacay waxaa Askarta mooraalka jabsan ee gumaysiga Itobiyalagaga dilay 4 Askari
14/04/2013 Xagarow oo Gunagado udhow dagaal xoogan oo halkaasi ku dhex maray NH/CWXO iyo Askarta gumaysiga Itobiyaayaa waxaa ciidamda naf lacaariga ah ee Itobiyalagaga dilay 6 Askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale
06/04/2013 dagaal ka dhacay kabaal-qabad oo Dhaxmadow katirsan waxaa askarta gumaysiga Itobiyalagaga dilay 2 Askari waxaana lagaga dhaawacay 1 kale
13/04/2013 karinka bilcilbuur oo Dhanaan u dhow waxaa Askarta gumaysiga Itobiyalagaga dilay 1 Askari waxaana lagaga dhaawacay 1 kale
24/04/2013 Deegaanka Shirbirley oo Dhanaan karitsan dagaal ku dhex maray Askarta mooraalka jabasan ee gumaysiga Itobiyaiyo NH/CWXO ayaa waxaa ciidamada gumaysiga Itobiyalagaga dilay 4 Askari waxaana lagaga dhaawacay 5 kale
17/04/2013 Cutub katirsan NH/CWXO ayaa shir ugu qabtay bulsho aad tiradan gudaha magaalada Qorra oo Dhanaan ka trirasn si loo wacyi galiyo dadwaynaha Ogaadeeniya ee ku dhaqan magaalada Qorra. Intii ay socotay khudbadaha madaxda CWXO ayaa kamiin ay ka xidheen qayb kamid ah ciidankii galay magaalada inta u dhaxaysa Xerada ciidamda gumaysiga Itobiyaiyo magaalada waxaa soo galay askar weerar ahayd oo kawar heshay in NH/CWXO ay bulshada shir isugu jira xogwaran iyo wacyi galin ugu hayaan magaalada waxaana halkaasi lagu helay askartii duulaanka ahayd oo si indha la’aan ah usoo galay kamiinkii ay xidheen NH/CWXO. Dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay ayaan wali laga helin faafaahin buuxda waxaase la sheegayaa in khasaare xoogan uu soo gaadhay asakrtii weerarka ahayd ee gumaysiga Itobiya, iyadoo shirkii ay u qabteen NH/CWXO bulshada magaalada Qorra uu si nabad galyo ah kusoo dhamaaday.
22/04/2013 Deegaanka lagu magacaabo Qoor-qoysta Caado dagaal ka dhacay waxaa Askarta gumaysiga Itobiyalagaga dilay hal Askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale
06/04/2013 Weerar mir ah oo ku qaadeen NH/CWXO gudaha magaalada Dhagaxbuur ayaa waxa Askarta gumaysiga Itobiyaweerarkaasi mirta ah lagaga dilay 3 Askari
Waxaa iyaguna jira dagaalo kale oo kala dhacay 0 4, 05, 06, 10, 14, 15 iyo 23 bishani afaraad deegaanada kala ah Cceelxaar, Xaaxi, Maroodiga, Falfal, Sanxaskule, Haan-Jiid, Hora-qaliifo, Buladari iyo Mulla waxaana dagaaladaasi askarta gumaysiga Itobiya kasoo gaadhay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Iyadoo wali ay si fiican uga da’ayaan Roobabkii Gugu guud ahaan dalka Ogaadeeniya ayaa waxaa laga soo sheegayaa deegaano kamid ah Ogaadeeniya khasaare uu gaystay roobku oo isug jira dhimasho iyo burbur hantiyeed. Deegaanada qaar ayaa roobabku waxa ay ku dileen dad shacab ah, halka meelo kalana ay roobabku qaadeen xoolo aad u tirabadan.
23/04/2013 Deegaanka lagu magacaabo Qararo oo Gunaguado udhow wuxuu hanqadhka roobku ku dilay 3 ruux oo shacab ah.
13/04/2013 Togga Dhaaroole oo Baali kuyaala ayaa qaaday xoollo aad u tirabadan oo ay lahaayeen reero Reer miyi ahaa oo daganaa halkaasi, xoolaha ay roobabku qaadeen ayaa ahaa 900 oo Neef oo Adhi ah iyo 50 Neef oo Geel ah.
18/04/2013 Biya-guduud oo Dhuxun katirsan wuxuu qaaday wiil yar oo sidded jir ahaa.